Shiinaha Japan warshad mesh warshad solay iyo soo saarayaasha | Jinqu Birta
Meshkeena grilishka mesh waxaa sidoo kale looyaqaan mesh gill la tuuri karo.
Mesh la geyn karo oo la tuuro ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa BBQ dhuxusha, sida hilibka lagu dubto Japanese Hibachi, Foornada dhuxusha ee BBQ.
Mesh siligga la tuuro ee la tuuro waxay la jirtaa dabeecadda qiimo jaban, uma baahna in la dhaqo, keydinta foosha, miisaanka fudud oo si fudud loogu qaado.
Cabirka caanka ah waxaa lagula talinayaa:
Wareeg mesh-Flat nooca wareega
Dhexroor silig ah 0.85mm
Cabir 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 263mm, 270mm, 280mm, 285mm, 300mm, 445mm
Mesh wareeg ah - nooca ARC
Cabir 240mm, 260mm, 270mm, 280mm, 295mm, 300mm, 330mm
Dhexroor silig ah 0.9mm, 0.95mm, 1.0mm
Cabir 220 * 220mm, 225 * 225mm, 240 * 240mm, 250 * 250mm, 280 * 280mm, 300 * 300mm
Dhexroor silig ah 0.95mm
Cabir 155 * 215mm, 167 * 216mm, 170 * 305mm, 170 * 330mm, 170 * 392mm, 180 * 280mm, 198 * 337mm, 200 * 300mm, 200 * 330mm, 210 * 270mm, 240 * 300mm, 250 * 450mm, 260 * 390mm, 270 * 175mm, 400 * 300mm, 400 * 350mm, 450 * 185mm
Dhammaan cabbirka caanka ah ee kor ku xusan waxay ku jiraan keyd ku filan. Diyaar u ah gaarsiinta waqti kasta!
Our mesh silig grillish mesh ayaa la soo galay suuqa Japan in ka badan 15 sano. Hadda waxaan nahay mid ka mid ah alaab-qeybiyaha ugu muhiimsan ee la isku halleyn karo iyo sumadeena ayaa sumcad sare ku leh Japan.
Kobaca shirkadeena iyo balaadhinta waxay laxiriiraan macaamilkeena taageerida iyo aaminaada-dheer. Waxaan sameyn doonaa 100% dadaal ah inaan sifiican oo kafiican usameyno.
8) Shahaadada ISO9001, SGS iyo imtixaanka dhinac saddexaad.
Qiyaas ahaan baakadka, sida caadiga ah 100 qaybood oo solay ah waxaa lagu buuxiyaa bac balaastik ah iyo labo baco ah (200 oo gogo ') oo kartoon ah. Cabbir kala duwan ayaa isku qasan kara hal weel oo buuxa, kaas oo badbaadin kara kharashkaaga. Waxaan sameyn karnaa qaab-dhismeed si loo buuxiyo shuruudahaaga kala duwan.
Ku soo dhawow baaritaankaaga waqti kasta!
Hore: Kuleylka hilibka dubista ee Korea
Xiga: La tuuro mesh solay mesh
Hilibka dubista mesh Mat
Mesh Mashiinka Hilibka lagu dubo
Grill Mesh Wixii Bbq
Mesh Screen Mashiil
Karitaanka Wire Mesh Cooking
Birta solay mesh Waayo, Bbq